पोखरामा देउवाप्रति खनिए : नेता पौडेल « News of Nepal
पोखरामा देउवाप्रति खनिए : नेता पौडेल
पोखरामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खनिएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको प्रथम गण्डकी प्रदेश सम्मेलन तथा राष्ट्रिय मगर विद्यार्थी संघको घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका दुई नेताबीच फरक फरक मत देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध बोल्दै देउवाले अदालतको निर्णयअनुुसार जाने र सडकमा नजाने बताउनुभएको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटनपश्चात् बोल्दै देउवाले सडकमा जाने भए किन चाहियो अदालत भन्दै अदालतले निर्वाचन भने निर्वाचन र संसद् पुनस्र्थापना भने पुनस्र्थापना हुने बताउँदै बिदा हुनुभएको थियो । सोही कार्यक्रमको संम्बोधन गर्नुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाको अभिव्यक्तिप्रति खण्डन गर्दै कांग्रेस हेरेर नबस्ने बताउनुभयो ।
कम्युनिस्ट सरकारले असंवैधानिक कदम चालिरहँदा कांग्रेस अदालत कुरेर बस्न सक्छ? हामी अदालत कुर्दैनौ हामी आन्दोलनमै जान्छौं । सडकले नै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्छ । लोकतन्त्रको उत्तरदायी को? देशको राजनीतिक पहरेदार गर्ने को? लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै विकास गर्न सक्ने भरोसाको केन्द्र भनेकै कांग्रेस हो । यस्तो पार्टी पाइयो कि कसले के भन्छ भनेर हामी हेरेर बस्नै होइन, अगाडि बढ्ने हो ।नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था छ संविधानको अक्षर र भावनाअनुरुप नै जानुपर्छ । चुनाव त सधैं हुन्छ । अदालतको भर किन लोकतन्त्र रह्यो भने अदालत रहन्छ, अदालत कुर्न हामी सक्दैनौं । कम्युनिस्ट सरकार आएको ३ वर्ष बित्न नपाउँदै सरकार भंग गर्नु केपी ओलीको तानाशाही कदम हो ।